Blog of Nyein Chan Yar: 2010.05
Mingalar Market Fire, Htet Htet
Please scroll down to read in zawgyi-one font. ကြှနျတေျာ့ အမွငျလေးတှေ ခပျတိုတိုပဲ ပွောမလို့ပါ။
မလေ ၂၄ မနကျ ၈နာရီလောကျမှာ ရနျကုနျ မင်ျဂလာဈေး မီးလောငျတယျ။ နောကျတဈရကျ ညနေ ၅နာရီလောကျမှ အပွီးအပွတျ မီးငွိမျးတယျ။
လောငျတဲ့နားတော့ ကိုယျတိုငျ မရောကျဖွဈပါဘူး။ အိမျကနတေော့ မီးခိုးလုံးကွီးတှေ ကွညျ့ပွီး မီးအတကျ အကကြို သိနရေတယျ။ နောကျ weekly eleven website သတငျး update တှနေဲ့ အဲ့ဒီက comment တှအေရ အခွအေနမှေနျကို သိနရေတယျ။ အစောပိုငျး ပုံတှနေဲ့ comment တှအေရ မီးသတျ အငျအား နဲတယျ။
Image source: www.irrawaddy.org
ညနမှေ ပဲခူးကလာတဲ့ ကားတှအေပါအဝငျ မီးသတျကား အငျအား ၆၅စီး လောကျနဲ့ ငွှိမျးတယျ ဆိုပါတယျ။ နောကျကသြှားပွီလေ။ ညနမေီးက ကြှနျတျောတို့အိမျ အဝေးကွီးကတောငျ မီးတောကျတှေ မွငျနရေတယျ။ မနကျက မီးသတျ အငျအား နဲပမေယျ့ နလေ့ညျ ၂ နာရီလောကျမှာ မိုးရှာလို့ (မိုးရှာလို့) မီးညှနျ့ ကွိုးသှား ပွီးမှ ညနေ ၅နာရီမှာ ပွနျလောငျတာလေ။ မနကျက စလောငျတာ ၄ထပျမှာ၊ ညနကေတြော့ ခေါငျမိုးပျေါ တကျလောငျတာ။ gasအိုးတှေ ပေါကျတော့ မီးအရမျးပွငျးလာတယျတဲ့။
Image source: http://www.news-eleven.com/
ည ၁၁နာရီလောကျ (ထငျတယျ) မိုးသဲသဲမဲမဲ ရှာတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှ မီးရှိနျ ကသြှားလရေဲ့။ ဒီအရှိနျ ကသြှားတဲ့ မီးဟာ နောကျတဈရကျညနေ (၂၅ရကျ) ၅နာရီ လောကျမှာ မိုးသဲကွီးမဲကွီး ရှာမှပဲ ပှဲသိမျးတယျ။
အစက ပွနျကွညျ့ရရငျ. . .
ဒီလောကျ ဈေးအကွီးကွီးမှာ မီးသတျပိုကျတှေ ထောငျ့တိုငျးမှာ တပျတားတဲ့ စနဈ မရှိဘူး။ (ခေါငျမိုးက ရပေနျးထှကျတဲ့ မီးသတျစနဈ မပွောပါနဲ့အုံး။)
ဆိုငျတိုငျးမှာ မီးသတျဘူး ထားရငျတောငျ လောငျလောငျခငျြး အားလုံး ဝိုငျးဖနျြးလိုကျလို့ရတယျ။ အားလုံးက တာဝနျသိဖို့လညျး လိုတယျ။
မီးသတျကား ရောကျလာတော့ ခကျြခငျြး မငွှိမျးသေးဘူးဆိုပဲ။ အမိနျ့စောငျ့နလေို့တဲ့။ ( ဒါမြိုး အမိနျ့စောငျ့ရတာ မီးလောငျတိုငျး ကွားရဖနျ မြားလှပွီ။ ဘယျတော့မှ policy ပွောငျးမှာလဲ။)
မိးသတျမှာ လှကေားရှညျကွီးနဲ့ ကားက ၃စီးပဲ ရှိတယျတဲ့။ ဒါတောငျ ကိုရီးယားက လှူထားလို့ ရှိတာ။
ကနျတျောကွီး နီးရကျနဲ့ ဘာလို့ ရပွေတျပွတျသှားရသေးတာလဲ။
Image source: http://www.niknayman-niknayman.co.cc/
The news article of Mingalar Market fire from 7days Journel issued on 26 May 2010. Images are rotated by photo hosting automatically. Please help yourself with it. :(
နောကျ topicက ထကျထကျမိုးဦး နဲ့ သတငျးထောကျ မအေးသူစံ ။
လူတှကေ သတငျးထောကျက ဒါမြိုးတှေ မေးရသလားတဲ့၊ ရိုကျခငျြစရာပဲတဲ့၊ မငျးသမီးဘကျက နကွေတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အမကတောငျ "ဟယျ. . . သနားပါတယျ။ ပွောကွလှနျးလို့ သူလညျး ပေါကျကှဲသှားမှာပေါ့" တဲ့။
ဒါမငျးသမီးကို ဗြူးတာပါ။ စာပေ အငျတာဗြူး မဟုတျဘူး။ မငျးသမီးကို ဗြူးတာမှာ ဒီလို personal မေးခှနျးတှကေ ထုံးစံပါပဲ။ မေးတဲ့သူရော မေးခှနျးရော မမှားဘူး။ တကယျဆို ဒါ သူ့အတှကျ အခှငျ့ အရေးပဲ။ သူနဲ့ပါတျသတျတဲ့ ကောလာဟလတှကေို ရှငျးဖို အခှငျ့ရစတေဲ့ မေးခှနျးတှေ။ ထားပါတော့ မဖွခေငျြ မဖွဘေူး ပွောလိုကျ ရပါတယျ။
ကဲနောကျဆုံး "နငျသှားလိုကျတော့" ဆိုပွီး မောငျးထုပျလိုကျတယျ။ တျောရောပေါ့။ ဆံပငျဆှဲ ပါးရိုကျ လညျပငျးညှဈတာ တော့ လှနျတာမဟုတျဘူးလား။ "သတငျးထောကျတှရေဲ့ နှဈပဲ တပွား လစာကို သနားလို့ ဖွပေေးနတော" ဆိုတာမြိုးပွောတာကလညျး စျောကားလှနျးတဲ့စကားပါ။
ကဲ . . .တျောပွီ။ ဒါဘဲ။ ။ :)
ကျွန်တော့် အမြင်လေးတွေ ခပ်တိုတိုပဲ ပြေါမလို့ပါ။
မေလ ၂၄ မနက် ၈နာရီလောက်မှာ ရန်ကုန် မင်္ဂ္လာဈေး မီးလောင်တယ်။ နောက်တစ်ရက် ညနေ ၅နာရီလောက်မှ အပြီးအပြတ် မီးငြိမ်းတယ်။
လောင်တဲ့နားတော့ ကိုယ်တိုင် မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။ အိမ်ကနေတော့ မီးခိုးလုံးကြီးတွေ ကြည့်ပြီး မီးအတက် အကျကို သိနေရတယ်။ နောက် weekly eleven website သတင်း update တွေနဲ့ အဲ့ဒီက comment တွေအရ အခြေအနေမှန်ကို သိနေရတယ်။ အစောပိုင်း ပုံတွေနဲ့ comment တွေအရ မီးသတ် အင်အား နဲတယ်။
ညနေမှ ပဲခူးကလာတဲ့ ကားတွေအပါအဝင် မီးသတ်ကား အင်အား ၆၅စီး လောက်နဲ့ ငြှိမ်းတယ် ဆိုပါတယ်။ နောက်ကျသွားပြီလေ။ ညနေမီးက ကျွန်တော်တို့အိမ် အဝေးကြီးကတောင် မီးတောက်တွေ မြင်နေရတယ်။ မနက်က မီးသတ် အင်အား နဲပေမယ့် နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာ မိုးရွာလို့ (မိုးရွာလို့) မီးညွန့် ကြိုးသွား ပြီးမှ ညနေ ၅နာရီမှာ ပြန်လောင်တာလေ။ မနက်က စလောင်တာ ၄ထပ်မှာ၊ ညနေကျတော့ ခေါင်မိုးပေါ် တက်လောင်တာ။ gasအိုးတွေ ပေါက်တော့ မီးအရမ်းပြင်းလာတယ်တဲ့။
Image source: http://www.news-eleven.com
ည ၁၁နာရီလောက် (ထင်တယ်) မိုးသဲသဲမဲမဲ ရွာတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှ မီးရှိန် ကျသွားလေရဲ့။ ဒီအရှိန် ကျသွားတဲ့ မီးဟာ နောက်တစ်ရက်ညနေ (၂၅ရက်) ၅နာရီ လောက်မှာ မိုးသဲကြီးမဲကြီး ရွာမှပဲ ပွဲသိမ်းတယ်။
အစက ပြန်ကြည့်ရရင်. . .
ဒီလောက် ဈေးအကြီးကြီးမှာ မီးသတ်ပိုက်တွေ ထောင့်တိုင်းမှာ တပ်တားတဲ့ စနစ် မရှိဘူး။ (ခေါင်မိုးက ရေပန်းထွက်တဲ့ မီးသတ်စနစ် မပြေါပါနဲ့အုံး။)
ဆိုင်တိုင်းမှာ မီးသတ်ဘူး ထားရင်တောင် လောင်လောင်ချင်း အားလုံး ဝိုင်းဖျန်းလိုက်လို့ရတယ်။ အားလုံးက တာဝန်သိဖို့လည်း လိုတယ်။
မီးသတ်ကား ရောက်လာတော့ ချက်ချင်း မငြှိမ်းသေးဘူးဆိုပဲ။ အမိန့်စောင့်နေလို့တဲ့။ ( ဒါမျိုး အမိန့်စောင့်ရတာ မီးလောင်တိုင်း ကြားရဖန် များလှပြီ။ ဘယ်တော့မှ policy ပြေါင်းမှာလဲ။)
မိးသတ်မှာ လှေကားရှည်ကြီးနဲ့ ကားက ၃စီးပဲ ရှိတယ်တဲ့။ ဒါတောင် ကိုရီးယားက လှူထားလို့ ရှိတာ။
ကန်တော်ကြီး နီးရက်နဲ့ ဘာလို့ ရေပြတ်ပြတ်သွားရသေးတာလဲ။
Image source: http://www.niknayman-niknayman.co.cc/2010/05/blog-post_1294.html
နောက် topicက ထက်ထက်မိုးဦး နဲ့ သတင်းထောက် မအေးသူစံ ။
လူတွေက သတင်းထောက်က ဒါမျိုးတွေ မေးရသလားတဲ့၊ ရိုက်ချင်စရာပဲတဲ့၊ မင်းသမီးဘက်က နေကြတယ်။ ကျွန်တော့် အမကတောင် "ဟယ်. . . သနားပါတယ်။ ပြေါကြလွန်းလို့ သူလည်း ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့" တဲ့။
ဒါမင်းသမီးကို ဗျူးတာပါ။ စာပေ အင်တာဗျူး မဟုတ်ဘူး။ မင်းသမီးကို ဗျူးတာမှာ ဒီလို personal မေးခွန်းတွေက ထုံးစံပါပဲ။ မေးတဲ့သူရော မေးခွန်းရော မမှားဘူး။ တကယ်ဆို ဒါ သူ့အတွက် အခွင့် အရေးပဲ။ သူနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ကောလာဟလတွေကို ရှင်းဖို အခွင့်ရစေတဲ့ မေးခွန်းတွေ။ ထားပါတော့ မဖြေချင် မဖြေဘူး ပြေါလိုက် ရပါတယ်။
ကဲနောက်ဆုံး "နင်သွားလိုက်တော့" ဆိုပြီး မောင်းထုပ်လိုက်တယ်။ တော်ရောပေါ့။ ဆံပင်ဆွဲ ပါးရိုက် လည်ပင်းညှစ်တာ တော့ လွန်တာမဟုတ်ဘူးလား။ "သတင်းထောက်တွေရဲ့ နှစ်ပဲ တပြါး လစာကို သနားလို့ ဖြေပေးနေတာ" ဆိုတာမျိုးပြေါတာကလည်း စော်ကားလွန်းတဲ့စကားပါ။
ကဲ . . .တော်ပြီ။ ဒါဘဲ။ ။ :)
Posted by dathana at Friday, May 28, 2010 No comments:
Labels: Burma, commentary, Myanmar
Yesterday, I spent my time for blog maintenance. Since I started using this this Wordpress blog, I couldn’t upgrade it to newer versions. Whenever I tried to upgrade using automatic update function, I got an error message saying "Unable to locate WordPress directory". When I looked forasolution, I foundasuggestion to use the plugin called "wordpress-automatic-upgrade ". I tried it and wow!!! It worked great. Its step by step update method is very very easy and straight forward. I’m very much obliged to the plugin writer.
Now, I could change my blog to the new template I like. (Coz the new template was not compatible with old versions of WP.)
By the way, Myanmar ISP now bans all the blogs it can detect and all the blog related sites. Most of the blog template sites are banned. I think, the firewall detect the URL for the word "blog", "theme" and so on. MyBlogLog is banned to. I still want to put components like "MyBlogLog", "Technorati" and site statistics. Ohhh…. Very time consuming on my very slow connection.
Posted by dathana at Monday, May 24, 2010 No comments: